Tag: zviitiko | Martech Zone
Vision6 Inosanganisa Chiitikobrite cheKukoka uye Yevaenzi-Chinyorwa Management
Chipiri, February 28, 2017 Douglas Karr
Vision6 ine kusangana kutsva neiyo chiitiko tekinoroji chikuva, Eventbrite, kune vatengesi kuti vagadzirise zvirinyore kukoka kwavo uye chiitiko kutaurirana. Ipuratifomu inokutendera ku: Gadzira Kukoka - Gadzira akanaka, akagadziridzwa mamemo ekukoka anonyatso kufadza vashanyi vako. Bvumirana vaenzi - Yako chiitiko muenzi runyorwa inoenderana zvakananga kubva kuChiitikobrite zvichiita kuti zvive nyore kutaurirana pamatanho ese. Ongorora - Gadzira yakateedzana kuti nyore nyore kunyoresa, zviyeuchidzo uye kutumira chiitiko kutevedzera. Nokubvumirana nekupinda
China, January 5, 2017 Chishanu, December 1, 2017 Douglas Karr
Shamwari yakanaka yakandibata vhiki ino ikati ine hama yaive nenzvimbo yaitora traffic yakawanda uye vaida kuona kana paine nzira yekuita mari vateereri. Mhinduro pfupi ndeyekuti hongu… asi handitendi kuti vazhinji vevashambadzi vadiki vanoona mukana kana maitiro ekuwedzera purofiti yeimba yavo. Ini ndoda kutanga nemapeni ... wozoshanda mukati